कतारको जेलमा थुनिए माडीका युवा बिनोद रानाभाट ! के गरे उनले यस्तो ! बचाउन सकिएला त ! आमा बाबाको रुवावासी ! भिडियो सहित ! – Samacharpati
Home » Topics » कतारको जेलमा थुनिए माडीका युवा बिनोद रानाभाट ! के गरे उनले यस्तो ! बचाउन सकिएला त ! आमा बाबाको रुवावासी ! भिडियो सहित !
कतारको जेलमा थुनिए माडीका युवा बिनोद रानाभाट ! के गरे उनले यस्तो ! बचाउन सकिएला त ! आमा बाबाको रुवावासी ! भिडियो सहित !
प्रकाशित मिति: 2076 आषाढ 10 मंगलबार(June 25, 2019) 3:02 AM बजे Posted By: Rss Feed
कतारको जेलमा थुनिएका माडीका युवा बिनोद रानाभाटको उद्धारको लागि अहिले सामाजिक संजाल लगायत अभियन्ताकारीहरु सहयोग सहयोग जुट्ने क्रम निकै तिब्र गतिमा बढेको देखा परेको छ ।बैदेशिक रोजगारीका लागि जनरल क्लिनरको पदमा कामका लागि करीब ३ बर्षअघि कतार पुग्नुभएका माडी नगरपालिका वडा नं. ७ कीर्तनपुर हाल भरतपुर १५ निवासी विनोद रानाभाट कतारस्थित ओक्रा जेलमा थुनिनुभएको छ । रानाभाटको आर्थिक अवस्था कमजोर रहेकोले सवैले सहयोग गरिदिन आज भरतपुरको चौबिसकोठीमा पत्रकार सम्मेलन गरि परिवारले आग्रह गरेको छ ।
यसअघि रानाभाटको उद्धारका लागी बिनोद रानाभाट रिहाइ तथा उद्धार समिति गठन गरिसकिएको छ । त्यसैगरि सहयोग गर्न चाहने ईच्छुकले कृषि विकास बैंक लि. माडीमा रहेको विनोद रानाभाट रिहाई तथा उद्धार समितीको खाता नं. ०५०८८०१३३७०९४०१३ मा रकम जम्मा गरि सहयोग गर्न सक्ने बिनोद रानाभाटका बुवा ढाकामोहन रानाभाटले जानकारी दिनुभयो । सहयोग गर्न ईच्छुकहरुले नेपाल भरिको कृषि विकास बैंक लि.बाट रकम जम्मा गर्न सक्नेछन् । त्यसैगरि सहयोगका लागी मोबाईल नं. ९८४५२०१४४२, ९८४५३४५१३४ तथा ९८४५३६८९७० मा पनि सम्पर्क गर्न सकिने समितीले जनाएको छ ।
रानाभाटलाई भारतीय कामदारले आक्रमण गरेकोमा आफ्नो ज्यानको सुरक्षाका लागि प्रतिकार गर्दा भारतकै अर्का कामदारको मृत्यु हुन पुगेको थियो । कतारस्थित अल ग्रुप क्लीनिङ कम्पनीमा जनरल क्लिन वर्कर पदमा काम गरिरहनुभएका उहाँलाई घटना लगत्तै कतार पुलिसले पक्राउ गरी ओक्रा जेलमा राखी मुद्धा चलाएको थियो । मुद्धाको फैसला अनुसार रानाभाटले ५ महिना भित्र भारतीय कामदारको परिवारलाई ब्लड मनीका रुपमा २ लाख ६० हजार कतारी रियल अर्थात नेपाली करीब ८२ लाख रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने पारिवारिक श्रोतले जनाएको छ ।
स्कटनेपालले कतारको जेलमा थुनिएका माडीका युवा बिनोद रानाभाटको बाबा आमा संग अनलाइन बिशेष कुराकानी गरी धेरै जानकारी समेट्न र दर्शकहरु माझ पुराउन निकै ठुलो भूमिका खेलेको जानकारी गराएको छ । पुरा भिडियो अन्तिम सम्म हेर्नुहोला र सक्दो शेयर गर्नु होला ।
कृषि बिकास बैंक
खाता नं – ०५०८८०१३३७०९४०१३
खाताको नाम- बिनोद रानाभाट रिहाई तथा उद्धार समिति
ढाका मोहन रानाभाट ९८११८३८००८ (बिनोदको बुवा)
यो भिडियोलाई लाईक कमेन्ट र सेयर गर्नुहोला
वडा कार्यालयकै फोहोर टोल विकास संस्थाको अगुवाईमा
शनिबार काठमाडौंमा प्रदर्शन
वडा कार्यालयकै फोहोर टोल विकास संस्थाको अगुवाईमा सफा गरियो
भारतका रविन्द्र कुमार मल्लिक ओभरअल च्याम्पियन
एसइई परीक्षामा उत्तीर्ण दलित विद्यार्थीहरुलाई सम्मान